MRB Kugara kaunda HPC akateedzana
Vazhinji vedu Makadhi ekugarazviri patent zvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve yedu Kambani yekugara.
Iyi nhevedzano yezvigadzirwa yakatsaurirwa kune iyo pokugara pakaunda yeOccupancy control, ndiko kuti, kana ikaziva kuti inodarika kukosha kwakatemwa, alarm inotumirwa kuzadzisa chinangwa chekudzora kuyerera kwevanhu, isu tine akawanda mamodheru Makadhi ekugara yako mareferenzi.
Pakupera kwa2014, guta hombe muChina raive risina Occupancy control system pamberi, izvo zvakakonzera chiitiko chakakura. Musi waZvita 31, guta iri harina kuronga zviitiko zveEvha yeGore Idzva, asi vanhu vazhinji vakaramba vachienda kuguta zvoga. Nzvimbo yechiratidzo muguta yakaitirwa Evha yeGore Idzva, asi zvisingatarisirwi zvakakonzera njodzi. Icho chaicho chakakonzera njodzi ndechekuti kuyerera kwevanhu paBund kwaive kwakanyanya. Nekuti pakange pasina Occupancy control system, pakanga pasina zviverengero zvenguva zvakaringana zvekuparadzira kuyerera kwevanhu. Saka ikozvino ngatitaurei nezveKambani yekugara.
Ungaverenga sei kuyerera kukuru kwevanhu? Izvi zvinofanirwa kuitwa nenyanzviKambani yekugara. Kambani yekugarachigadzirwa chitsva chakavakirwa pane infrared, 2D, 3D, AI uye mamwe matekinoroji. Iyo ine yakawandisa kuverenga uye yakagadzikana dhinda kufambisa. Chinhu chakanyanya kukosha mashandiro ema mobile smart terminals, ayo ari nyore uye nekukurumidza.Yekugara yekuverenga sensor inorekodha huwandu hwevanhu vanoyerera mukati meanoshanda anoshanda renji, uye inoendesa iyo data kune nharembozha kuti iongororwe kuburikidza nesoftware, uye iyo yakaongororwa data inogona zvakare kutumirwa zvakananga kuunza mishumo.
Yekugara yekuverenga sensor inogona zvakare kusanganisa hombe data. Inowanzo shandiswa mumahombekombe makuru ezvitoro, dzimba dzekuratidzira, maraibhurari, dzimba dzemamuvhi, zviteshi zvechitima, uye zvimwe zvinokwezva zvekushanya nedzimwe nzvimbo dzeveruzhinji, nekuti kuyerera kwevanhu munzvimbo idzi kwakakura kwazvo uye kunoda nyanzviYekugara yekuverenga sensorkuunganidza manhamba. Iyo MRBYekugara yekuverenga sensor inogona kuburitsa vanhu kuyerera data kune chero nguva yenguva sezvainodiwa, uye inogona kuburitsa machati neawa, zuva, svondo, mwedzi, uye gore, kuitira kuti igone kunyatso kuverenga, kubatanidza dhata, uye kurodha mishumo pane zviteshi zvefoni. Kubhurawuza uye Kubata kudzora kunogona kuitwa panguva imwe chete. Kana kuyerera kwevanhu kukapfuura kukosha kwakatemwa, alarm inokonzereswa
MRB Yekugara kadhi vhidhiyo
Tine mhando dzakawanda dze IR Kambani yekugara, 2D, 3D, AI Kambani yekugara, panogara paine imwe inokukodzera, ndapota taura nesu, isu tinokurudzira iyo yakakodzera kwazvo Kambani yekugara zvako mukati memaawa makumi maviri nemana.
Pashure: MRB isina waya Vanhu vanopokana HPC005
Zvadaro: MRB otomatiki mutyairi pabhasi HPC168
Kuvaka Occupancy Counter
Yekugara Counter Sensor
Kugara Kwekutarisa Counter
Chengetera Occupancy Counter